Diso fanantenana ireo mpianatra ho mpitsabo tokony hivoaka
Mahatsiaro tena ho voafitaka tanteraka ireo mpianatra ho mpitsabo nandranto fianarana tao amin'ny Institut de Management et de Gestion Appliquée esty Ankadindramamy.
Vita ny fianarana nandritra ny valo taona, natao ny fiofanana arak'asa teny anivon'ireny hopitaly lehibe teto an-drenivohitra sy tany Fianarantsoa, tontosa ny fanadinana kiinika ary voasoratra ny boky saingy very an-javony izany rehetra izany. Rehefa nozohina ny tantara dia nampandry adrisa sy nampanantena volana ireo mpiantra ireo tompon'andraikitra tao amin'ny sekoly ambony. "Sodoka ihany izahay raha nanantona teny amin'ny ministeran'ny fahasalamana ka nahita fa manana taratasy manamarina ny fisokafan'ny sekoly ny IMAGEAPPLI ka revo izahay nisoratra anarana tamin'ny lalam-piofanana fitsaboana. Nisy rahateo fanangolena tamin'ny alalan'ny fisian'ny sekoly lehibe any Canada afaka mandray ireo mpianatra mendrika, hay moa ka fitaka bevava avokoa ny zava-drehetra", hoy ny solon-tenan'ny mpianatra ho mpitsabo efa nahavita ny dingana rehetra.
Nomarihan'ireto mpianatra ireto hatrany fa mpampoanatra matihanina eny Ankatso avokoa ary tompon'andraikitra ambony eny amin'ny hopitaly ireo mpitsabo niantika ny fianarana. Maneho ny alahelony ireto mpianatra manoloana ny tsy fahafahany maka ny mari-pahaizana ho dokotera kanefa efa lany rondoha sy lany vola ary very fotoana lava tamin'ny fianarana rehetra. "Maro tamin'ny mpianatra teny Ankatso no nisafidy hianatra tamin'io sekoly io. Lazaina aminay ombieny fa mila miverina taona voalohany izahay raha tia ho lasa mpitsabo. Dia tena tsy misy azon'ny fanjakana atao mihitsy ve ho fanarenana ny lany rehetra ? Tokony hisy fandinihina ny famindrana anay satria ny diplaoma sisa tadiavinay", hoy ihany ireo mpianatra nanazava.
Manahirana ireto mpianatra ireto ny hampakatra ny raharaha eny amin'ny fitsarana satria mety tsy hahazo tombony amin'izany izy ireo. Faniriany ny hahazoany alalana hamoaka ny voka-pikarohana amin'ny ara-dalàna ka hahazo ny mari-pahaizana maha-dokotera. Ho hita eo ny tohiny.